Ibiyoshunqiselwa impepho ingane obekuthiwa ithunjiwe | News24
Ibiyoshunqiselwa impepho ingane obekuthiwa ithunjiwe
Durban - Ibiyoshunqiselwa impepho eGreytown, maphakathi neKwaZulu-Natal kubo kayise wayo wangempela ingane ‘eduke’ ngoLwesihlanu kudunwa imoto kanina, okugcine ngokuthi aboshwe nowesilisa okukholakala ukuthi nguyise wayo.
ILANGA lithole ngemithombo yalo engashayi eceleni - esondelene nabazali bale ngane - ukuthi ukuntshontshwa kwayo bekuhlelwe ngunina, uNkk Sbongile Mbambo, 34, nesoka lakhe, 26, - ILANGA elinalo igama lalo.
Kuthiwa selokhu izelwe ingane ibihlupha, ikhala ibe luqanduqandu ihlula ngisho isishunqiselwe izinyamazane. Kuthiwa uNkk Mbambo ubebhekene nenkinga enkulu yokuthi uzophuma kanjani kumyeni wakhe, uMnu Funokwakhe Mbambo, nengane enenyanga izelwe uma eseyoshisela ingane impepho eGreytown njengoba uMnu Mbambo ubazi ukuthi ngeyakhe ingane.
Baboshwe nomunye wesifazane, 23, - leli phephandaba elingeke lilidalule igama lakhe njengoba bevela namhlanje ngoMsombuluko eNkantolo yeMantshi yaseThekwini - okuthiwa ubeqashelwe ukuba ngumzanyana ngesikhathi iyoshunqiselwa impepho njengoba uNkk Mbambo ebengekho.
Umthombo uveza ukuthi into ebambise abasolwa, wumehlokaboni ka-R250 000 okhishwe ngamaphoyisa, wabaphithanisela ngamakhanda bawuconsela amathe.
OLUNYE UDABA: ICosatu ibekele uNgqongqoshe isonto ukuba esule esikhundleni
Le mali kuthiwa ibajike imiqondo, uNkk Mbambo nesoka lakhe, bahlela ukuthi mabayiveze ingane kube sengathi itholwe yisoka ukuze bezothola imali.
UNkk Mbambo kuthiwa usuke nengane eGreytown ehamba nomzanyana noyise wayo, bafonela amaphoyisa bazenza abantu abanolwazi lokuthi ingane ifihlwephi.
Bebehlele ukuthi uma sebezohlangana namaphoyisa uNkk Mbambo uzokwehla emotweni angamboni kanti bazolahlwa ngelakubo bahlangane nawo engakehli.
Kuthiwa amaphoyisa abalahlise umkhondo ngendawo abebevumelene ukuthi bazohlangana kuyona, okwenze babathola besenoNkk Mbambo.
Abasolwa bavele enkantolo namahlanje ngoMsombuluko, kanti icala lihlehliselwe uLwesithathu njengoba kusalindwe kuhlolwe ulibofuzo futhi uMbuso ubusahlanganisa uhlu lwamacala abathweswe wona abasolwa.
Kuthiwa ngaphambi kokuqhubeka kwecala kuzomele kuqalwe ngokuthi kwenziwe ulibofuzo ngenxa yokuthi nokungabaza ngokuthi ubani uyise wengane
Icala lihlehliselwe uLwesithathu.